I-Apple irekhoda amanani angcono kwimarike yePC eyehlayo | Ndisuka mac
UJavier Labrador | | Ezahlukeneyo
Ukuba kwangoko kule veki besithetha ngayo apho uphando lubeke khona iiLaptops ezintsha zeAppleUkuthathela ingqalelo ubuninzi beempawu kunye nezixhobo zomsebenzisi, Namhlanje siza kuthetha ngezona ziphumo zentengiso kwintengiso yekhompyuter kwikota yokuqala ye-2017.
Kwaye kunjalo ngaphandle kweemarike zekhompyuter ezibolayo ezikhoyo namhlanje (ngokubanzi iziphumo ezibi kuzo zonke iimveliso, ngokuhla okucacileyo kokuthengwa kwayo kunye nokusetyenziswa kwayo ngenxa yokwanda kwamacwecwe amakhulu kunye nokusebenza kweefowuni), I-Apple iyakwazi ukufumana ubalo oluqinisekileyo lokuthengisa, bonyusa amanani abo ngokubhekisele kunyaka ophelileyo ngale mihla inye.
U-Apple uthumele ukonyuka kwe-4.5% kwintengiso kwiinyanga ezintathu zokuqala zalo nyaka. Nangona kunjalo, imakethi iyonke yentengiso yekhompyuter iphinde yatyibilika kwakhona. Ke ngoko, iApple idibanisa indawo yesi-5 kunye neeyunithi ezingama-4.2 ezigidi ezithengisiweyoUkuthatha i- 6.8% isabelo sentengiso. Le yidatha ephucula amanani eminyaka emi-5 edlulileyo.
Njengesiqhelo, lenovo (19.9% ​​isabelo sentengiso) sidityanisiwe njengeyona nto ithengiswa kakhulu kwikhompyuter kunye neeyunithi ezizigidi ezili-12.4, ekuphuculeni nge-1.2% irekhodi layo kunyaka ophelileyo. Ulandela ngokusondeleyo HP (19.5% isabelo sentengiso) kunye neeyunithi ezizigidi ezili-12.
Nangona kunjalo, Ukuthengiswa kweekhompyuter jikelele kwehle nge-2.4% kwakhona, Ukuqhubekeka notyekelo olubi oluqhubeke ngaphezulu kweminyaka emi-5. Ngokwabahlalutyi abaninzi, abavelisi bePC kuya kufuneka bazivumelanise nezi zinto zimbi ukuba bafuna iPC ibange ukuba inyamalale ngokusisigxina kwiminyaka embalwa.
“Abathengisi abathathu abaphezulu- iLenovo, i-HP kunye neDell- bazakulwela icandelo elikhulu lamashishini. Imakethi ine Amathuba ancitshiswe kakhulu ngezantsi kwezi zintathu, ngaphandle kweApple, Ezinesiseko esomeleleyo sabathengi kwiimarike ezithile. "
Oku kuvuka okuncinci kwintengiso yeelaptop kunye nedesktop kwaqala ngasekupheleni kuka-2016, nangona kusekutsha kakhulu ukuba ungazi ukuba ngaba ngumkhwa oza kuphucula kancinci kancinci amanani, okanye ukuba ngokuchaseneyo, yinto nje "yokuqhekeka" kweemarike ngaphambi kokungenakuphepheka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-Apple irekhoda amanani angcono kwimarike yePC eyehlayo
I-Telegraph yeMac ihlaziywa kwakhona, ngeli xesha inguqulelo 2.94